Yamkela i-condo enamachibi ekwabelwana ngawo, ibhafu eshushu, i-sauna, intenetya nokunye!
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguVacasa Idaho
Ukusuka kwiplanga yayo entle eyenziwe ngamaplanga ukuya kwindawo yomlilo yerhasi, le ndawo inegumbi lokulala leLanga elinamagumbi amabini okulala kufutshane nembali yase-Elkhorn yeyona ndawo ifanelekileyo yeholideyi. Le condo inobunewunewu ikunika ukufikelela kumaziko e-condo, njengamachibi angaphandle alingana ne-Olimpiki, ibhafu eshushu, igumbi le-sauna / umphunga, iinkundla zentenetya, kunye neklabhu enemisebenzi emininzi yolonwabo. Ikwakwindawo efanelekileyo yokuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukutyibilika, kunye nokuthenga ngaphakathi nakwindawo ejikeleze iSun Valley.
Iimayile nje ezintathu ezinesiqingatha ukusuka kwiivenkile, iigalari, kunye neendawo zokutyela kumbindi wedolophu yaseKetchum, le condo intle ikwindawo entle! Indawo yokumisa ibhasi yeKART yasimahla (Ketchum Area Rapid Transit) inkqubo ilapha ngaphambili. Le nqanawa yasimahla iya kukuthwala ngokukhawuleza ukujikeleza indawo ukuya kwiindawo ezininzi kunye nezinto eziluncedo eSun Valley/Ketchum. Abakhweli bebhayisikile banokutsiba kwindlela eya emantla kwiikhilomitha ezili-10 nasezantsi kwiikhilomitha ezili-16 ecaleni koMlambo i-Big Wood. Yiza ne-kayak, ibhayisekile, okanye ibhokisi yokuqhuba ukuya kwindawo ekufuphi ye-Sawtooth yoLonwabo yeSizwe-iikhilomitha ezilishumi elinanye emantla-apho uyakonwabela konke ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukuloba, kunye nokuhamba ngesikhephe okuza namachibi angama-300 e-alpine kunye neencochoyi ezigqunywe likhephu.
Izinto ekufuneka uzazi:
I-WiFi yasimahla kunye nekhebula
Nceda uqaphele: Ngenxa yemeko eyodwa eye yaziswa zizithintelo zasekhaya, i-Sun Valley igqibe ekubeni ivale iintaba kwixesha elishiyekileyo le-2019/2020 ski season. Nceda uqaphele ukuba oku kunokuchaphazela okanye kungazichaphazeli izinto eziluncedo ezikwisiza kwezo propati banazo. Siyaxolisa ngayo nayiphi na ingxaki kwaye siyakuxabisa ukuqonda kwakho. Enkosi!
Izinto eziluncedo ekuhlaleni zibonelelwa yi-Elkhorn e-Sun Valley kwaye zinamaxesha okuvalwa. Akukho machibi ukusuka kuMhla waBasebenzi kude kube nguMhla weSikhumbuzo. Iibhafu ezishushu kunye neesauna zivaliwe ngamaxesha athile onyaka ukuze zigcinwe; ziya kuvalwa emva koSuku lomSebenzi de kube semva koMbulelo, emva koko entwasahlobo xa intaba ivala ukutyibilika ngo-Epreli ukuya kwiSikhumbuzo. Igalufa nentenetya zivaliwe ukusuka ngoNovemba 1 ukuya kuMeyi 1; oku kuxhomekeke kwimozulu kwaye kunokwandiswa okanye kuncitshiswe ngokubona kombutho ngaphandle kwesizathu okanye isaziso.
**Akukho qula lokungena kunye nebhafu eshushu ngexesha lobusika lika-2020/21 ngenxa yolwakhiwo.
Amanqaku okupaka: Kukho indawo yokupaka yasimahla yemoto enye. Akukho Passing yokupaka efunekayo. Paka esitratweni phambi kweyunithi okanye kwiqashiso elikwimpuma ye-condo. Izithuthi zinokumiswa kwiindawo ezichongiweyo zokupaka. Qwalasela iimpawu zokupaka kunye neendawo zokupaka ezibekelwe bucala/ezikhubazekileyo. Ukumisa iinqwelo ezirhuqwayo akuvumelekanga, njengoko kukho indawo yokupaka ekhoyo ekhoyo kwaye iindawo zokupaka zincinci kakhulu. Kusenokubakho indawo yokupaka kwindawo yokupaka iRiver Run kwi-3rd Avenue eKetchum, kodwa ayijongwanga kwaye iindwendwe zipaka ngomngcipheko wazo.
IiNkcukacha zokuShutha kwi-Ski: Khuphela i-app ye-Routeshout 2.0 (hayi i-Routeshout) ukuze ubone iishedyuli zangoku.
Ukupheliswa komonakalo: Ixabiso lilonke lobhukisho lwakho lwalePropati (iSakhiwo) luquka umrhumo wokurhoxisa umonakalo oquka ukuya kuthi ga kwi-$2,000 yomonakalo ngengozi kwiPropati okanye imixholo yayo (enjengefenitshala, izinto ezilungiswayo, kunye nezixhobo zombane) ukuba nje wena xela isiganeko kumamkeli phambi kokuba uphume. Ulwazi oluninzi lunokufumaneka kwi "Imithetho eyongezelelweyo" kwiphepha lokuphuma.
Umbuki zindwendwe ngu- Vacasa Idaho
Izimvo eziyi-3 678